အွန်လိုင်းတွင် နာမည်ကျော်ကြားလာခြင်းဖြင့် မွေးရပ်မြေရှိ မြင်းစီးလုပ်ငန်း မြှင့်တင်ရေး၌ အထောက်အကူဖြစ်စေ - Xinhua News Agency
စီချွမ်းပြည်နယ်၊ တိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၏ Garze စီရင်စု၊ Litang ကောင်တီ၊ Letong မြို့ရှိ Himalaya ပြတိုက်တွင် မြင်းအသံအားနားထောင်နေသော Tamdrin အား ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ချိန်တူး၊ ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အင်တာနက်တွင် ရေပန်းစားကျော်ကြားလာသူတစ်ဦးကြောင့် ဒေသတွင်းမြင်းစီးပြိုင်ပွဲနှင့် အပန်းဖြေခရီးသွားလုပ်ငန်းအား ပံ့ပိုးကူညီရန် တရုတ်နိုင်ငံမြင်းစီးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (CHIA) က တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း စီချွမ်း ပြည်နယ်ရှိ Litang ကောင်တီနှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူညီစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြေင်း သိရသည်။
အသင်းအနေဖြင့် ၎င်းကောင်တီအတွက် မြင်း၆ ကောင်၊ မြင်းအတွက်ဆေး အရေအတွက် ၂,၀၀၀ နှင့် မြင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရေး စသည့် ကျွမ်းကျင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း စုစုပေါင်းတန်ဖိုး ယွမ် ၃.၁၄ သန်းကျော် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၉၄,၀၀၀ ခန့်) အား ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တွင် ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်က တိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ Garze စီရင်စု၊ Litang မှ အထင်ကရ ဖျော်ဖြေရေး လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သော မြင်းစီးပြိုင်ပွဲသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်က ယင်းဒေသရှိ ပြုံးရွှင်နေသော လူငယ်မြင်းထိန်းသမားတစ်ဦး၏ ၇ စက္ကန့်ကြာ ဗီဒီယိုတစ်ခု အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ပျံ့နှံ့သွားချိန်မှစ၍ နိုင်ငံတစ်ဝန်း စိတ်ဝင်စားမှုများပြားလာခဲ့သည်။
ယင်းဗီဒီယိုတွင်မြင်တွေ့ရသော အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် Tamdrin သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ လူမှုမီဒီယာတွင် လူသိများလာခဲ့ပြီး ယခုအခါ ၎င်း၏မွေးရပ်မြေဖြစ်သော Litang ကောင်တီ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်း သံတမန် ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၎င်း၏မန်ဒရင်းအမည်ဖြစ်သော Ding Zhen နှင့် ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများသည် အဓိက လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် ဆက်လက်ရေပန်းစားလာခဲ့သည်။
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် မီတာ ၄၀၀၀ တွင်တည်ရှိသော Litang မြို့ကို “ကောင်းကင်ပေါ်ကမြို့” ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြကြောင်း၊ ၎င်း၏ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကြောင့် မဖွံ့ဖြိုးသေးသောခရီးသွားလုပ်ငန်းအား မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Online celebrity helps boost horse industry in home county
CHENGDU, Jan. 13 (Xinhua) — China Horse Industry Association (CHIA) has signedastrategic cooperation agreement with Litang County in southwest China’s Sichuan Province, to support local horse racing and leisure tourism industry as an Internet celebrity has thrust the county into limelight.
On Tuesday, the association offered donations in the form of six horses, 2,000 horse dewormers, and professional services such as horse registration and promotion activities to the county, withatotal value of more than 3.14 million yuan (about 494,000 U.S. dollars).
Horse racing, an iconic entertainment activity in Litang, the Tibetan Autonomous Prefecture of Garze, has drawn much traction nationwide sincea7-second video featuringasmiling young herder from the county went viral in 2020.
Tamdrin, the 22-year-old boy seen in the video, becameasocial media sensation in China and is now the tourism ambassador of his home county of Litang.
His Mandarin name Ding Zhen and related topics continued to trend on major social media platforms. Located 4,000 meters above sea level, Litang is dubbed “the city in the sky.” Thanks to the limelight, the county has been able to boost its under-developed tourism industry. Enditem